Omaly no nivoaka tetsy amin’ny lapan’ny fitsarana Anosy ny didim-pitsarana mikasika izany. Notsiahivin’i Solofo Ranaivo, izay mpanao gazety niharan-doza sy sahy nametraka ny fitoriana, ny zava-niseho, fa mbola tsy tafiakatra tsara tao anaty fiara akory ny tenany dia efa nalefan’ny mpamily ny fiara ka nampisolifatra ny tenany tamin’io fotoana io ary nitsoaka moa ity fiara ity fa tsy niraharaha azy. Tsy mitombona, hoy izy, ny filazan’ny mpamily fa niandry ahy tany an-dohan’Analakely izy ireo. Voasazy an-tranomaizina 4 volana ihany koa ny mpanampy ny mpamily ary mandoa onitra 2 tapitrisa ariary. Satria moa misy andraikitry ny tranom-piantohana ihany koa ity raharaha ity dia voasazy handoha onitra 5 tapitrisa ariary ny tranom-piatohana izay voakasik’izany, raha ny fanazavana hatrany.